XASAASI + VIDEO: Xildhibaankii Su’aasha kululeed waydiiyay madaxweynaha Puntland oo wareysi xiiso leh bixiyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XASAASI + VIDEO: Xildhibaankii Su’aasha kululeed waydiiyay madaxweynaha Puntland oo wareysi xiiso...
XASAASI + VIDEO: Xildhibaankii Su’aasha kululeed waydiiyay madaxweynaha Puntland oo wareysi xiiso leh bixiyay
Garoowe (Halqaran.com) – Xildhibaankii dhowaan su’aalaha kululaa waydiiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareysi cusub oo dhinacyo badan taabaya bixiyay.
Xildhibaan Cawil Daad ayaa wareysigiisa kaga hadlay go’aanka laalista dacwaddii ka dhanka aheyd iyo xaaladda Siyaasadda ee Puntland.
Mar xildhibaan Cawil la waydiiyay, in su’aashii uu dhowaan madaxweyne Deni uu su‘aalay in uu cudur daar ka bixiyinayo iyo in kale ayuu ku jawaabay. “Haddii la ammaano madaxwayne Saciid Deni waa la khiyaamay, balse markaad dhaliisha u sheegto waa inuu Saxo”.
Haddaba halka hoose ka daawo muuqaalka Wareysiga oo xiiso leh:
Xildhibaanka su'aasha kulul waydiiyay